By ယုဖြူဟန် 24 February 2017
ပရိသတ်များရဲ့ ဝေဖန်မှု၊ စိတ်ဝင်စားခံရမှုများနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ Myanmar Idol Season Top6Final List တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များက စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ဦးဝင်းဦးရဲ့ တေးသီချင်းများနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ညတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်လို့ အနုပညာရှင်အချို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို သူတို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ရေးသားမှုတွေအပြင် အခြား အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုပါ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗို(သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်)
သားငယ်ကို အကြိမ် ၃၀ vote ပြစ်လိုက်တယ်။
ဒီနေ့ Myanmar Idol အားလုံးကောင်း၏။
အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေး (သရုပ်ဆောင်)
အိုး … မေဘရဏီလို ..!!!
No.2 ပဲဟေ့ !!!
Chit Thinzar Thant (အဆိုတော် စင်ဒီ)
မကြည့်တော့ဘူးလို့လုပ်ထားပေမယ့် colgate လေးအတွက် စိတ်ပူလို့လေ။
ဒီတပတ်ကတော့ Billy အကောင်းဆုံး
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ ကျနော်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ နဂိုကတည်းကလည်း TV channel တွေ သိပ်မကြည့်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မနေ့က နာမည်ကြီးဘာညာနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်တက်လာတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကြည့်တော့ မမမိုး သီချင်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးပေ့ါ။ ဘာပဲပြောပြော ကိုသိန်းတန် ကောက်ချက်ချတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂန္တဝင်မြောက်တဲ့ အဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ သီချင်းတွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်တာ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း မြန်မာသံ ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ သီချင်းတွေကို အခုလို ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကနေမှ ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော ဂုဏ်ပြုရာလည်း ရောက်တယ်။
မြန်မာသံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်ခေတ်ကလေးတွေ ဒီအပေါ်မှာ လေးစား အထင်ကြီးရကောင်းမှန်းလည်း ဖြစ်တာပေ့ါလေ။ တခုပိုပြီးတော့ ဖြစ်စေချင်တာက ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီးတွေသာမက အဆိုတော်ကြီးတွေ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကိုပါ ရေးတဲ့ တေးရေးဆရာတွေကိုပါ ဒိုင်တွေကဖြစ်ဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ပြောပေးရင် ပိုကောင်းတာပေါ့လေ။ ဦးဝင်းဦးဆိုရင်လည်း စွယ်စုံရအနုပညာရှင်ကြီးဆိုတော့ သူသီချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း သီချင်းတော်တော်များများကိုဆိုတယ်။ လိုင်းပေါင်းစုံပေါ့။ ဥပမာ – ညီတော်မင်းနန် သီချင်းလိုမျိုး ရွှေအင်း၀ သီချင်းလိုမျိုး တကယ့် ဂန္တဝင်မြောက်တဲ့ သီချင်းမျိုးတွေကို အားလုံးကြားဖူးနားဝဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းမျိုးထက် သူပညာသားပါစွာဆိုထားတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေကို အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေ မဆိုတောင်မှ ဝါရင့် တခြားအဆိုတော်တွေကကြားမှာ ဖျော်ဖြေမှုတခုအနေနဲ့ လုပ်ပြရင် ပိုကောင်းမယ်ပေ့ါ။ ဒါမှ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ တနွယ်ငင် တံစဉ်ပါ ဆိုသလို ဂန္တဝင်မြောက်အဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ တကယ်ကိုပညာသားပါတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေကို ပရိသတ် အားလုံးက သတိရ နားထောင်လို့ရတာပေါ့နော်။
အကယ်ဒမီ ရန်အောင် (သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်)
အားလုံးကတော့ ကြိုးစားထားကြတာကို ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် တွေ့ရတယ်။ ဦးဝင်ဦး သီချင်းတွေက နားထောင်ရတာ ဆိုလွယ်တေးလို့ထင်ရပေမယ့် ခက်တဲ့သီချင်းတွေ အများကြီးပဲ။ စကားလုံးအထားအသို အတိမ်အနက်ရယ် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်အောင် ဆိုရတာရယ် တချို့စကားလုံးတွေဆို တော်တော်လေးကို သွက်ပြီး အသက်ရှုရတာတောင် ခက်ခက်ခဲခဲရှိတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။ သားငယ်ဆိုသွားတဲ့ “မမမိုး” တို့လို သီချင်းမျိုးဆို အသက်ရှုရဖို့ကို သေချာလေ့ကျင့်ယူရမယ့် အနေအထားမျိုးပါ။ အကုန်လုံး ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပေ့ါလေ။ ကျနော်ကတော့ သားငယ်ဆိုသွားတာကို မနေ့က တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်။ ကျနော်တို့က အမြဲတမ်းနားစွဲပြီးသားဆိုတော့ ဦးဝင်းဦးနဲ့ ထပ်တူမဖြစ်တောင်မှ တော်တော်ကြီး နီးစပ်တာကို ကျနော်တို့က လက်ခံပါတယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒီလို အနေအထားမျိုးကို ကြိုးစားနေရတာဆိုတော့လေ။ အမှန်ဆို ဦးဝင်းဦးရဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဦးဝင်ဦးဆိုတာ အရမ်းကို လေးစားအားကျဖွယ် ကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်ကြီး တယောက်ဆိုတာ သူရေးတဲ့ ဝတ္ထုတွေ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ကြည့်ရင် သူ့ရဲ့ အနုပညာ အတိမ်အနက်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးတွေအားလုံးကို ဦးဝင်ဦးဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်ကြီး တယောက်ကို လေးစားသင့်တယ်။ အတုယူသင့်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။